Iifoto zikaGoogle: Iindaba ezivezwe kuGoogle I / O 2018 | I-Androidsis
Ushicilelo lonyaka lweGoogle I / O sele luqalisile. Ke kwezi ntsuku siza kufumana zonke iindaba malunga neemveliso ezahlukeneyo kunye neenkonzo zikaGoogle. Omnye wokuqala ukuba ophambili kulo msitho Ziifoto zikaGoogle. Ukusukela inani leempawu ezintsha kunye nophuculo lubhengeziwe kule app. Isicelo esonyuse kakhulu ubukho bayo.
Ngapha koko, namhlanje sesinye sezona zicelo zibalulekileyo zenkampani. Into ecacileyo nge uphuculo oluninzi olwenziwe kwiiFoto zikaGoogle kunyaka ophelileyo. Namhlanje iindaba eziza kuza nesicelo sele zibhengeziwe.
Sifumana uthotho lwezinto eziphuculweyo, nangona kukho izinto ezimbalwa ezicacileyo kwaye ziphawula umkhombandlela wazo. Ukusukela ukuba inkampani izinikele ngamandla kubukrelekrele bokufakelwa kunye nokufunda ngomatshini. Uninzi lwezi zinto ziphuhlileyo zinento yokwenza nale mimandla. Ezi ziindaba eziza kuza kwiifoto zikaGoogle ezibhengezwe kuGoogle I / O 2018:
1 Susa umbala ongasemva
2 Iingcebiso zokwabelana ngeefoto
3 Guqula ifoto ibe yiPDF ngendlela efanelekileyo
4 Buyisela iifoto ezindala
5 Ukulungiswa kwe-gloss
6 Ukulungiswa koxwebhu
7 Isebenza neefoto zikaGoogle
Susa umbala ongasemva
Kulezo zithombe apho sifuna khona, isicelo siya kusinika ukubakho kokuphelisa umbala wezinto ezivela ngasemva ezifanayo. Ngale ndlela, umntu okanye abantu abakulo mfanekiso baya kuphuma ngombala. Kodwa imvelaphi iya kuba ngaphandle kombala. Inqaku elithile lobugcisa kwinxalenye yeefoto zikaGoogle. Nangona ngokuqinisekileyo abasebenzisi bayithanda kakhulu.
Iingcebiso zokwabelana ngeefoto
Kwimeko apho umntu ebonakala kakhulu kwiifoto zethu, Isicelo siyakuqonda ukuba lo mntu uphakathi kwabo sinxibelelana nabo. Ukuba kunjalo, uza kuphakamisa ukuba sabelane ngemifanekiso nalo mntu usebenzisa umyalezo odadayo. Ke ukuba inkqubo yokwabelana ngeefoto ilula kakhulu kwaye iyakhawuleza kumsebenzisi. Ngaphandle kokuba yinkqubo ezenzekelayo.
Guqula ifoto ibe yiPDF ngendlela efanelekileyo
Kuya kufuneka uthumele ifoto kwifomathi yePDF ngezizathu ezininzi ezahlukeneyo. Kule meko, iiFoto zikaGoogle zifuna ukuba inkqubo ibe lula. Ke, usetyenziso luya kuguqula iifayile ofuna ukuziguqula ngokuzenzekelayo nangokwengqondo. Ke siyabona kwakhona ukuba ubukrelekrele bokuzenzela buya kubakho ngokubonakalayo kwisicelo.
Buyisela iifoto ezindala
Isicelo siya kusinceda sibuyisele iifoto zethu ezindala ukuze singalahleki iinkumbulo zethu ezixabisekileyo. Ukongeza ekusincedeni ukuba sibuyisele kwaye siphucule umgangatho wabo, kukwakho omnye umsebenzi ohambelana ngakumbi neefoto ezindala kwisicelo. Kuba iya kuba luncedo xa ufaka imibala kwiifoto ezindala.
Kubonakala ngathi, Iifoto zikaGoogle ziya kuba nakho ukufaka imibala kwezi zithombe zakudala zithathwe ngombala omnyama nomhlophe Ngendlela ebonakala ngathi ifoto ithathwe kutsha nje okanye ngekhamera yangoku. Ke kunokuba yindlela elula yokufaka imibala kwiifoto zabasebenzisi ekufuneka basebenzise ezi ntlobo zeziphumo kwimifanekiso yabo. Iluncedo ngakumbi ukuba awufuni ukusebenzisa izixhobo ezimbaxa zokuhlela umfanekiso.
Xa sithatha ifoto kwaye kumnyama, usetyenziso luya kuyifumana ngokuzenzekelayo. Emva kokufumanisa oku, uza kwenza ntoni izakulungisa ukuqaqamba ngokuzenzekelayo, ukuze ifoto ekuthethwa ngayo ikhanye ngokukhanya ngakumbi nangakumbi. Iifoto zikaGoogle ziya kusibonisa ukuba ifoto injani nokulungiswa kokukhanya kwaye iya kusibuza ukuba ngaba sifuna ukuyigcina okanye hayi phakathi kweefoto zethu, sithathe indawo yomfanekiso wokuqala obumnyama kakhulu.
Sihlala sithatha iifoto zamaxwebhu ngefowuni, kwimeko apho kufuneka sizithumele komnye umntu. Isicelo iya kuthi ibhaqe lo mfanekiso kwaye isibonise ukuba uxwebhu lukhangeleka ngathi luchithwe njani kwaye lubonwe ngokufanelekileyo. Ke kufuneka samkele ukuba siyafuna lo mfanekiso. Indlela elula kwaye iluncedo kakhulu yokuba neefoto ezilungileyo zamaxwebhu okanye ii-invoyisi. Ke sinokuzisebenzisa kwiimeko ezininzi enkosi kumgangatho wazo.
Isebenza neefoto zikaGoogle
Eyokugqibela kwezi ndaba yile Inkqubo yeqabane apho abavelisi bekhamera baya kuba nakho ukudibanisa iifoto zikaGoogle. Ngale ndlela, abasebenzisi baya kuba nakho ukufikelela kwiifoto kwilifu. Ukwazi ukusebenzisa izixhobo ezinobuchule kunye neefilitha ezikhoyo ngaphandle kokusebenzisa ifowuni yakho. Lonke olu tshintsho lunokwenziwa efini.
Ezi ndaba ziya kuza kwisicelo kungekudala. Nangona okwangoku uGoogle engakhange abonakalise nawuphi na umhla wokwaziswa kwayo. Ke kubonakala ngathi kuya kufuneka silinde okwethutyana. Kodwa akufuneki bathathe ixesha elide ukuba babe yinyani. Ucinga ntoni ngezi zinto zintsha zifikayo Iifoto zikaGoogle PC?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Zonke iindaba ezivela kwiifoto zikaGoogle ezivezwe kuGoogle I / O 2018
Iindaba ze-Android Auto esiza kuyibona kwiGoogle I / O 2018